Xildhbaan C/samad heshiiskii MD Xasan iyo maamulada, Federaalka, arrinta Galmudug iyo amniga +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xildhbaan C/samad heshiiskii MD Xasan iyo maamulada, Federaalka, arrinta Galmudug iyo amniga +Cod
Xildhibaan C/samad Macalin Maxamuud oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa sheegay inaysan dalka ka dhici doonin wax doorasho ah sanadka soo socdo, hawlo dhowr ah oo la doonaayay in la qabto, oo aan weli qabsoomin.
Xildhibaanka, ayaa yiri “Dalka doorasho kama dhici doonto sanadka 2016-ka, sababo jiro awadood. Kala bar dalka waxaa heysata Al Shabaab, sida Gobolada Jubbooyinka iyo meelo badan iyaga ayaa jooggo.”
Sidoo kale wuxuu yiri “Dowladdu ma heyso tiro koob sax ah oo shacabka Somaliyeed ah, kolka ay ka qayb qaadanayaan Doorashada Madaxtinimada.”
Waxa uu intaa ku daray “Dastuurka ayaa u baahan in loo qaado afti dadweyne, welina looma qaadin aftidaas. Waxaas oo dhan iyadoo aan la qaban doorasho dalka kama qabsoomi karto.”
Mudanaha ka tirsan Baarlamaanka Somaliya, ayaa sheegaaya in dalka ay doorasho ka qabsoomi karto kolka laga sifeeyo Ururka Al Shabaab, lana sameeyo tiro koob sax ah oo shacabka ah iyo in afti dadweyne lagu meel mariyo Dastuurka Qabyo Qoraalka Wadanka loo sameeyay.
“Horta waxaa loo baahan yahay in nabadiidka laga sifeeyo dalka oo dhan, in la ogaado tirada saxda ah ee dadka ka qayb qaadanaaya doorashada iyo in afti dadweyne loo qaado Dastuurka. Markaas ka dib ayay dalka ka qabsoomi kartaa doorasho.” Ayuu yiri Xildhibaan C/samad oo ka soo muuqday Warbaahinta gudaha.